Wafdi ka socda dowlada Federalka oo gaaray magaalada Doolow -
Home News Wafdi ka socda dowlada Federalka oo gaaray magaalada Doolow
Wafdi ka socda dowlada Federalka oo gaaray magaalada Doolow
Wafdi ballaaran oo ay ka mid yihiin wasiirka Caddaaladda, wasiirada warfaafinta, Gaashaandhigga, iyo saraakiil ciidan ayaa gaaray maanta Degmada Doolow ee Gobolka Gedo, si ay usoo qiimeyaan khasaaraha gaaray shacabka iyo xaaladda guud ee Gobolkaas, iyagoo uga sii gudbay Beled-xaawo.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, Xasan Xuseen Xaaji ayaa bulshada ku dhaqan Balad-xaawo ugu mahad celiyay sidii ay u garab istaageen ciidanka xoogga Dalka, isagoo u tacsiyeeyay qoysaskii ay waxyeellada kasoo gaadhay dagaalkii dhowaan halkaasi ka dhacay.
Mudane, Xasan Xuseen Xaaji ayaa sidoo kale sheegay in la dallacsiin doono saraakiishii hoggaamineysay dagaalkii ka dhacay Balad-xaawo.
Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in baaris lagu sameyn-doono duullaankii lagu soo qaaday Balad-xaawo, cid-walba oo ku lug yeelatana Caddaaladda la horkeeni doono.
Wasiirka Warfaafinta ayaa sidoo ka tacsiyeeyay qoysaskii iyo qaraabadii ay waxyeellada kasoo gaadhay weerarkii ay malleeshiyada C/rashiid Janan kusoo qaadeen Balad-xaawo, wuxuuna u mahad celiyay ciidankii ka jawaabay daan-daansiga cadowga.
” Dadkii lahaa Jabhadi majirto kaalaya Baledxaawo arka, dadkii lahaa dhib ma dhicin kaalaya Baladxaawo arka, dadkii lahaa Faragelin ma jirto kaalaya Baladxaawo arka” ayuu yiri Wasiir Dubbe.
Previous articleBernie Sanders gloves, memes help raise $ 1.8 million for charity
Next articleDowlada Soomaaliya oo ka hortimid qaabka loo magacaabay Guddiyada Farsamo ee Jubbaland iyo Puntland